Sidee si ay u gudbiyaan fariimaha qoraalka ka macruufka 6 ilaa 7 macruufka
> Resource > macruufka > Sidee si ay u gudbiyaan fariimaha qoraalka ka macruufka 6 ilaa macruufka 7/8/9
La soo iibiyo iPhone cusub socda macruufka 7? Just cusboonaynta mid ka mid ah iPhone si aad u macruufka 7? Waxaa laga yaabaa inaad rabto in ay u gudbiyaan farriimo qoraal ah ka jir iPhone la macruufka 6 waa in. Si ay u fududaato, waxaad u tagi kartaa in ay Wondershare MobileTrans ama Wondershare MobileTrans u Mac caawimaad. Waa ah iPhone SMS qalab kala iibsiga haboon inuu ku caawiyo in aad fariimaha qoraalka ah oo dhan ka ah iPhone wareejiyo la macruufka 6 ilaa macruufka kale oo soo ordaya 7 gudahood 1 click. Waxa ka muhiimsan, waxa ay sidoo kale ku siinayaa awood ay ku wareejiso music, playlists, sawiro, videos iyo xiriirada, oo ay ku jiraan kuwa ku iCloud, Exchange, Hotmail, Yahoo iyo xisaab kale.
Bedelka fariimaha qoraalka ah iPhone ka macruufka 6 ilaa 7 macruufka
Download iPhone SMS qalab kala iibsiga si ay u gudbiyaan farriimo qoraal ah ka macruufka 6 ilaa 7 macruufka.
Fiiro gaar ah: Waqtiga xaadirka ah, ee Wondershare MobileTrans taageertaa iPhone socda iOS9, macruufka 8, macruufka 7, macruufka 6 iyo macruufka 5.
Tallaabada 1. Ku rakib MobileTrans qalabka iyo waxa maamula kombiyuutarka
Ku rakib MobileTrans qalabka kombiyuutarka. Waxaa Orod oo guji Phone in Transfer Phone inay soo galaan suuqa kala iibsiga telefoonka.
Fiiro gaar ah: Si aad u isticmaasho MobileTrans qalab si uu u sameeyo macruufka SMS kala iibsiga, waa in aad la rakibi Lugood kombiyuutarka hore. Haddii kale, qalab MobileTrans ee idin ​​xusuusin doonaa waxa ku rakibidda aad u ordaan markii ugu horeysay.
Tallaabada 2. Isku aad laba iPhone in kombiyuutarka la fiilooyinka USB
Isticmaal laba USB fiilooyinka in ay ku xidhmaan labada iPhone in kombiyuutarka. Marka qalab MobileTrans u arko iPhone aad ku xiran yihiin, waxaa loo soo dajiyo doonaa darawallada iyaga oo ku, ka dibna aan u muujiyo in uu furmo suuqa hoose.
Sida lagu muujiyey sawirka hoos ku qoran, ee u dhexeeya labada iPhone waa Flip button. Waxaad ku riixi kartaa marka aad rabto in aad SMS ka macruufka 7 wareejiyo macruufka 6. Waxaa intaa dheer, ka hor xogta Clear nuqul tab ee geeska hoose ee saxda ah loo isticmaalo si ay kaaga caawiyaan in aad u faaruqiso sanduuqa fariin telefoonka Ahaado ah. Sidaas darteed, waxaa aad u hubiso haddii aad iminka ku soo keliya mooyaane fariimaha ka iPhone socda macruufka 6.
Tallaabada 3. SMS Transfer ka macruufka 6 ilaa 7 macruufka
Haddii aad kaliya ma doonayo in aan wareejiyo files marka laga reebo SMS, waa in aad uncheck faylasha kale. Riix buluuga Start Copy button. Markaas, sug ilaa seconds kala iibsiga SMS la soo gabagabeeyo. Markaas, riix OK button.
Waxaa la sameeyey! SMS waxay ku, oo ay ku jiraan kuwa kooxda, waa ku macruufka iPhone socda 7. Sidee fudud oo haboon yahay! Hadda, kaliya download Wonershare MobileTrans qalabka in aad nuqulka qoraalka ka macruufka 6 ilaa macruufka 7/8/9.